Ufake iloli ezihlahleni ngenxa yendlwabu – AMABHINCA
Ufake iloli ezihlahleni ngenxa yendlwabu
BY EZIVUTHAYO EMAPUTALAND
Ufake iloli ezihlahleni elibelwe ukushaya indlwabu. Lisale limahlephuhlephu ngaphambili iloli eliphaphalaze layodla izihlahla nezigxobo umshayeli walo ematasa exukuxukuza uhalakasha lomphambili wakhe, eshaya indlwabu iloli kuhamba.
Bekungathi uxukuza idemu lengane lena ekhalela ubisi. Isthombe seloli elihlafakile sinaso sisigodlele ukuvikela isithunzi senkaphane kwazise kasiyitholanga ukuziphendulela kodwa ozakwabo bomshayeli womshayi wendlwabu bakhuza bayababaza ngabakubonile.
Lama Loli esimanje anobuchwepheshe becamera othi uhamba Ibe ikuqopha, njengebhanoyi. Nxashana sekwenzeke inkinga kuvulwe yona. Kule vidiyo ubonakala enyakaza-nyakaza, efaka isandla ngaphambili. Iloli belihamba nje emgwaqweni oqonqile,
aqale-ke ngohalasha: "xuku xuku xukuxuku xuku xuku xukuxukuxuxu xuku xuku xukuxu hhayi hhayi hhayi," Kusho yena. Ubonakala sengathi ushokhwa ugesi womelela esitelingini, ebhonga. Iloli laphaphalaza layothi ggu ezihlahleni. Ozakwabo banyanyile bazwakala bethi:
"hhay ngeke uyasihlaza Lo akasatholi ngani abadayisayo. Kuzothiwa sonke siphila ngendlwabu," omunye kwiclip esinayo uthi:"uloyiwe Lona vele ngeke esabuya emsebenzini bazomxosha," Kuthiwa Indoda yendlwabu ithole iphuphuza esimongo kayilimalanga.
PreviousIsiyaziwa inhloso yomhlangano wetiye
NextAkaphilile neze kahle uMgqilazi wedixa